सरकारका पछिल्ला निर्णयमा एमाले गरम, माओवादी नरम किन ? यसो भन्छन् प्रचण्ड | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सरकारका पछिल्ला निर्णयमा एमाले गरम, माओवादी नरम किन ? यसो भन्छन् प्रचण्ड
सरकारका पछिल्ला निर्णयमा एमाले गरम, माओवादी नरम किन ? यसो भन्छन् प्रचण्ड
माघ १३ गते, २०७४ - १३:३५
चितवन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवा सरकारले जनमतको खिल्ली उडाएको भन्दै नयाँ सरकार बनेपछि पुर्नविचार हुने बताएका छन् ।
चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकाहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले देउवा सरकारका पछिल्ला निर्णयमा नयाँ सरकारले पुर्नविचार गर्ने बताएका हुन् । सरकारका पछिल्ला निर्णयमा एमाले गरम माओवादी नरम भयो भन्ने हल्ला चलेका बेला उनले एमालेले पत्रकार सम्मेलन गरेर व्यक्त गरेको धारणामा माओवादीको सहमति रहेको समेत स्पष्ट पारे ।
उनले आफु उपत्यका बाहिर भएका कारण पत्रकार सम्मेलनमा सहभागि हुन नसकेको भन्दै उमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धारणा सार्वजानिक गर्न सहमति दिएको बताए । ‘त्यो दिन म नेपालगञ्ज र भैरहवामा थिए, केपी जीले पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्‍यो भन्नुभयो, म आउन ढिला भयो‘, प्रचण्डले भने, ‘तर, मैले जे कुरा भन्नु छ तपाईले भन्दा हुन्छ भनेर सहमति दिएकै थिए ।’
प्रचण्डले नयाँ सरकार गठन अघि नै पार्टी एकता हुने दाबी गर्दै छलफललाइृ तीब्रता दिएको समेत बताए ।
माघ १३ गते, २०७४ - १३:३५ मा प्रकाशित